जनकपुरका सुभाषले बनाए साईवरक्राईम न्युनिकरण गर्ने अत्याधुनिक यन्त्र – Shirish News
जनकपुरका सुभाषले बनाए साईवरक्राईम न्युनिकरण गर्ने अत्याधुनिक यन्त्र
जनकपुरधाम, जेठ २६ गते ।
जनकपुरका एक युवकले भीडभाड अथवा सार्वजनिक स्थलमा हुने साईवरक्राईम न्युनिकरण गर्ने अत्याधुनिक यन्त्र निर्माण गरेका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका ९ बस्ने विष्णु कुवरका छोरा २७ वर्षका सुभाष कुवरले साईवरक्राईम नियन्त्रण गर्ने र कुनै पनि स्थलको विषेश जानकारी दिने एटीआई यन्त्रको निर्माण गरेका हुन् ।
कम्प्युटर ईन्जिनियर पढ्नु भएका सुभाषले दुई वर्ष अघि निर्माण गरेको एटीए यन्त्र पहिलो पटक केहि दिन अघि जनकपुर विमानस्थलमा जडान गर्नुभएको थियो । जनकपुर विमानस्थलमा एटीआई यन्त्रणको सफलता पूर्वक परिक्षण गरी कुवरले शनिवार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
प्रदेश नं. २ का समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहको उपस्थितिमा एटीआई यन्त्रणको विषयमा जानकारी सार्वजनिक गरिएको छ । कुवरले यस यन्त्रणको प्रयोगले पर्यटक लगायत सर्वसाधारणहरुलाई फाईदा हुने र साईवर अपराध लगायत अमाञ्चित गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न सहायक हुने बताउनुभयो । पहिलो पटक एटीआई यन्त्र निर्माण गरेकाले सरकारबाट यसको जडान गर्ने अनुमति पाउन समस्या भएको तर पहिलो पटक स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा जनकपुर विमानस्थलमा राखेर परिक्षण गरेको कुवरको भनाई छ ।
उहाँले यो यन्त्रण विश्वमै पहिलो पटक आफुले बनाएको र एउटा एटीआई यन्त्रण निर्माण गर्न कम्तिमा डेढदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने बताउनुभयो ।
यन्त्र सार्वजनिकीकरण पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री साहले प्रदेश नं. २ को राजधानीमा यस्तो यन्त्रण पहिलो पटक निर्माण गर्ने कुवरको प्रशंसा गर्दै यस यन्त्रले अहिलेको ईन्टरनेटको संसारमा बढेको साईवर अपराधलाई निरुत्साहित हुने राख्नुभयो । उहाँले यस उपकरणलाई उत्पादन तथा स्वीकृतिको लागि प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस यन्त्रणको प्रयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज र देश भित्रको विकृति र अपराधलाई नियन्त्र गर्न ठुलो मदत पुग्ने विश्वास व्यक्त नर्गुभयो ।
यन्त्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झा , राजपाका केन्द्रिय सदस्इ सुरेन्द्र मण्डल लगायत थिए ।
के हो एटीआई यन्त्र ?
आविस्कारक सुभाष कुवरका अनुसार ः एटीआई यन्त्रण भनेको अंग्रेजीमा एनि टाईम ईन्टरनेट सेवा हो । यो चौबीसै घण्टा फ्री ईनटरनेट अथवा वाईफाई सेवा जस्तै हुन्छ । तर यसको प्रयोग गर्न पसवर्ड हाल्नु पर्छ । जुन पासवर्ड एटीआई यन्त्रबाट लिन सकिन्छ । फ्री र्वाइफाई जडान गर्न र ठाउँको विषयमा विषेश जानकारी लिन चाहने व्यक्तिले जडान गरिएको एटीआई यन्त्रबाट पासवर्ड लिन सक्छन् ।
वाईफाई प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिले एटीआई यन्त्रबाट पासवर्ड लिन प्रेसस्वीच थिच्नु पर्छ । जसले वाईफाई कनेक्टको लागि पासवर्ड अर्थात युजरनेम सहितको एउटा एटीएमको पर्ची जस्तै पेपर दिन्छ । जसमा पासवर्ड हुन्छ । व्यक्ति पिच्छे पासवर्ड फरक हुन्छ । एटीआई मेसिनबाट वासवर्ड लिन गएका व्यक्तिले प्रेस स्वीच थिच्ने वितिकै यन्त्रणले उसको फोटो खिच्नुको साथै पसवर्ड सहितको एउटा कागजमा दिन्छ ।
र पासवर्ड राखेर ईन्टरनेट कनेक्ट गर्दा उसको अन्य केहि समान्य जानकारी समेत एटीआई यन्त्रणले क्याच गर्छ । जडान गरेको सिस्टम अनुसार एक घण्टा वा बढी ५।१० घण्टा सम्म मात्र रहन्छ । तर हाल जनकपुर विमानस्थलमा जडान गरिएको एटीआई यन्त्रमा एक घण्टा सिसस्टम राखिएको छ । जुन एक घण्टा मात्र कुनै पनि व्यक्तिले कनेक्ट गरेर प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसपछि स्वतः ईन्टरनेट डिसकनेक्ट हुन्छ । जनकपुर विमान स्थलमा आउनेजाने यात्रुहरु बढीमा एक घण्टा पर्खने हुनाले त्यतिन्जेल सम्म त्यहाका यात्रुहरुले फ्रि ईन्टरनेट सुविधाको लाभ लिन सक्छन् । र यदि कुनै त्यो ईन्टरनेट प्रयोग कर्ताले कुनै साईवर अपराध वा अन्य गलतविधि गरेमा तुरन्त जानकारी हुन्छ । र उसलाई तुरन्त चिन्न र पक्राउ गर्न सकिन्छ । जनकपुर विमान स्थलमा जडान गरिएको एटीआई यन्त्रणमा जनकपुरका अन्य जानकारीसहित प्लेन कतिबजे आउने जाने समेतका जानकारीहरु पाउन सकिन्छ । यो सेवा एकपटकमा २ सयभन्दा बढीले प्रायोग गर्न सक्छन् ।
यस एटीआई यन्त्रणको प्रयोगले सार्वजनिक स्थल वा कुनै संघसंस्थामा हुने साईवर अपराध र अन्य अमाञ्चित गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण मदत गर्छ । एटीआई यन्त्रणमा जुनसुकै कम्पनीको ईन्टरनेट प्रयोग गरेर जडान गर्न सकिन्छ ।
एमाले नेपाल-खनाल पक्षले प्रदेश २ का संसदीय दलको नेतामा शत्रुधन महतोलाई चयन गरे, मण्डल हटाइए
आगलागी हुँदा ११ लाखको क्षति
गौशालामा शिक्षकहरुको विरोध प्रर्दशन, कोणसभा कस्ले के भने ?(भिडियो सहित हेर्नुस् )
जनकपुर उद्योग वाणज्यि संघको निर्वाचनमा मतगणनालाई विवाद हुँदा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप
गोली प्रहार गरी सुनचाँदी व्यवसायीको हत्या, श्रीमती घाइते